Rasmi: Heshiiskii Uu Edin Dzeko Ugu Soo Biirayay Kooxda Chelsea Oo Bur-Buray & Sababta Oo La Ogaaday – Kooxda.com
Home 2018 January Ingiriiska, Italy, Wararka Maanta Rasmi: Heshiiskii Uu Edin Dzeko Ugu Soo Biirayay Kooxda Chelsea Oo Bur-Buray & Sababta Oo La Ogaaday
Rasmi: Heshiiskii Uu Edin Dzeko Ugu Soo Biirayay Kooxda Chelsea Oo Bur-Buray & Sababta Oo La Ogaaday
January 29, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Heshiiskii uu Edin Dzeko ugu soo biiri lahaa ayaa ayaa si Rasmi ah u bur-buray iyada oo kooxda chelsea isaga laabatay u dhaqaaqistiisa una dhaaqaaqi doonta weeraryahan kale maalmaha yar ee ka haray suuqa kala iibsiga January.
Heshiiska ayaa bur-buray kadib markii ay kooxda chelsea heshiiska shaqsiga ah la gaari wayday xiddiga reer Bosnia sida ay sheegayaan wararku.
Tababaraha kooxda chelsea ee Antonio Conte ayaa raadinayay weeraryahan cusub waxana uu doonayay in uu Dzeko ku soo celiyo premier leaguue bishan.
Antonio Conte ayaa rajeynayay inuu soo gabagabeyn doono saxiixa Edin Dzeko bisha January, Sky Sport ayaa haatan sheegaysa in uu heshiisku bur-buray kadib markii ay chelsea ku guuldaraystay in ay xiddiga la gaarto heshiiska shaqsiga ee mushaharka uu qaadanayo iy hehsiiska uu saxiixayo.
Inkasta oo uu Dzeko u muuqdo in uu Blues u dhaqaaqayo suuqa kala iibsiga bishan, macalinka Roma Eusebio Di Francesco ayaa si lama filaan ah ugu bilaabay xiddiga labadii kulan ee ugu dambeysay ee ay Roma la ciyaartay Sampdoria.
Kulankii hore oo uu goolka bar-baraha u dhaliyay Roma ayaa u muuqday kulankii ugu dambeeyay ee uu u ciyaaray kooxda Roma laakiin waxa uu shakiga heshiisku bilaabmay markii kulankii kale lagu soo bilaabay.
Dzeko oo 31 jri ah ayaa la fahamsanaa in uu ka laba labaynayay in uu u soo dhaqaaqo premier league maadama uuna champions league ka qayb qaadan doonin inta ka dhiman xilli ciyaareedkan.